थियज एच। पीएसओपी प्रोफेशनल सेक्रेटरीलाई कमजोर पार्नु भएको थियो र पहिले नै यो नै भयो: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
यति धेरै नै मनोवैज्ञानिक अपरेशन (पीओएसओपीएस) को साथ रहन गाह्रो छ कि तपाई हाल वरिपरि उडान गर्दै हुनुहुन्छ। मैले पहिले नै घोषणा गरेको थियो कि एनी फेबरका चीजहरूले 'संयुक्त खोज' अनुप्रयोगको परिचय लिनु पर्छ। आज हामी त्यो अनुप्रयोगको परिचय देख्छौं मिडिया द्वारा धक्का दिए; जहाँ उनीहरूले 'शर्लक' नाममा परिवर्तन गरेका छन्, त्यसो गर्दा पाठकले त्यो एपमा गग्लिंग गर्दा मार्टिन व्रिजल्याण्डको वेबसाइटमा अन्त हुँदैन र थाहा पाउँछ कि यो लामो समयको लागि सबै योजना बनाई थियो।
मनोवैज्ञानिक अपरेशन (पीओएसओपीएस) समय र समय प्रयोग गरिन्छ फेरि नयाँ कानून र उपायहरू पेश गर्न। यस्तो एप उपयोगी देखिन्छ, तर वास्तवमा यसले नीदरल्याण्डको न केवल एक सम्भाव्य जासूस न्याय गर्दछ, तर तपाईंलाई तपाईंलाई तपाईंको क्यामेरा, माइक्रोफोन र स्थान प्रयोग गर्न अधिकार दिन्छ, ताकि तपाइँलाई कानूनी रूपमा आफैलाई ट्याप गर्न सकिन्छ।
मेरो लेखमा 29 अन्तिम मई मा, मैले हालको साताका उन हत्याका घटनाहरु कसरी नयाँ विधान र उपायहरूको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर संक्षिप्त सारांश दिए। तिनीहरूलाई फेरि पढ्नुहोस् (यहाँ)। मैले पहिले नै अनुप्रयोगको परिचय घोषणा गरेको छु 18 डिसेम्बर 2017 मा लाई। वास्तवमा, ती सबै चीजहरूमा मैले भविष्यवाणी गरेको छु, तर यो देखिन्छ कि मिडियाको सम्मोहन यति बलियो छ कि यसले अब सत्य बताउँछ कि के तपाई सत्य प्रकट गर्नुहुन्छ; मानिसहरू बस सुन्न वा यसलाई हेर्न चाहँदैनन्।
बीचमा हामी फेरि अर्को गरी हराएको अवस्थामा (अजा शेपा), त्यसैले हामी त्यो नयाँ एप डाउनलोड गर्न सक्छौं। यसको लागि खोजी पनि pyromaniac मा गौडा, सम्भवतः कि सस्पेन्स एपको छिटो परिचय संग मद्दत गर्दछ। हो, निस्सन्देह हामी यस हराइरहेको अन्जा स्कापको अर्को चित्र देख्दछौं र आगोहरू पनि वास्तविक छन्, तर जब मानिसहरूले सिर्जना गर्न थालेका छन् कि हामी सिर्जना गरेका समस्याहरूसँग खेल्दछौं; आत्म-निर्मित हत्याका घटनाहरू जसमा मुख्य क्यारेक्टरहरू स्टुडियो स्टुडियो प्रविधिहरू (सरल सफ्टवेयरको साथ) 'गहिरो नकली' मार्फत सिर्जना गरिएका थिए?
सजिलो डाउनलोड सफ्टवेयरको साथ तपाईंले एक अवस्थित व्यक्ति सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र पुरा इतिहास सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ; भिडियो सबूत, तस्बिरहरू र मित्रहरू र परिचितहरू सहित गहिरोफेक प्रविधिको माध्यमद्वारा जीवनमा उडाएर समावेश गर्दछ (क्लिक गर्नुहोस् यो लिङ्क र हेर्नुहोस् कि कसरी काम गर्दछ)। टिभि दर्शक वा फेसबुक प्रयोगकर्ताले छविहरू हेर्ने सोच्नेहरू लाई आजीवन जस्तो लाग्छ। र यसैले तपाई सजिलै नयाँ कानूनको लागि स्वीकृति मोडमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यो प्रयासको लायक छ।
उल्लेख गरिएको रूपमा, मैले 29 मा पहिले नै घोषणा गरेको छु कि व्यावसायिक गोपनीयता सम्झौता गरिनेछ। आज हामी पढ्छौ de telegraaf:
गत हप्तामा लिम्बर्गको अदालतले निर्णय गर्यो कि Mondsian थियम्स एच को क्यामेरा छविहरू साझेदारी गर्नुपर्छ न्यायिक अधिकारीहरूले थप अनुसन्धानका लागि। चिकित्सा गोप्यताको कारणले क्लिनिक पहिले छविहरू प्रदान गर्न चाहँदैनन्। तर न्यायाधीशले यो सुअवसरलाई सत्य खोज्नको महत्त्वको मार्ग दिनुपर्ने निर्णय गरे। "म बुझ्छु कि ओम छविहरू हेर्न र अधिसूचनाको लागि निर्णय लिन चाहन्छ।"
एक वकील जसले मान्नुहुन्छ कि कानून अधिसूचना अदालतले उल्लङ्घन गरेको छ? त्यो अझै अर्को संकेत हो कि हामी फेरि पीएसओपी मामला संग काम गर्दै छन्। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा छैन कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ भने तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ। त्यहाँ, पनि कानून संघर्ष बिना उल्लङ्घन गरिएको थियो। त्यो साँच्चिकै मात्र र मात्र स्वीकार्य छ, किनभने यस्तो मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारोका कारण यो उद्देश्यको लागि घृणा गरिएको छ: साधारणतया कहिल्यै स्वीकार्य हुने छैन कि कानुन अनुकूलन। दाहिने पिसोप वकीलले हातमा राखेका छन्, जसले उनीहरूको कंधेलाई ध्वन्यात्मक उल्लङ्घनको उल्लङ्घनका लागि झन्झट्याउँछ, सबैले तपाईंलाई गर्नु पर्छ सबैलाई नयाँ नियममा नयाँ नियममा बदलिदिन्छन् र तपाईंले गर्नुभयो।
स्रोत लिङ्क सूची: rtlnieuws.nl, rtlnieuws.nl, nieuwsopbeeld.nl, telegraaf.nl
ट्याग: वकील, अजा, एनी, अनुप्रयोग, व्यावसायिक गोपनीयता, Faber, विशेष, H., psyop, एक साथ, भेडा, शर्लाक, Thijs, छुटेको छ, कानूनी विशेषाधिकार, सत्य खोज्ने, कानून, खोज्नुहोस्
3 जून 2019 मा 13: 19
तपाइँ तिनीहरूलाई थाहा छ ... उनीहरूको नायकलाई थाहा छ जुन मान्छे बाट सोशल मिडियामा भएका प्रतिक्रियाहरू। यसले कसरी काम गर्दछ। PsyOp अपरेशन टुरल सेना द्वारा सोशल मिडिया मा निगरानी गरिएको छ: जो मान्छे मान्छे को जान्दछन् को घोषणा गर्न जाँदैछन्।
हामी स्पष्ट हुनुहोस्: तपाईं वास्तवमा अवस्थित व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर हेर्न कुनै पनि सामाजिक मिडिया प्रोफाइल जाँच गर्न सक्नुहुन्न। यद्यपि उनीसँग साथी साथीहरू छन् वा तिनीहरूको फोटो / भिडियोहरूमा मनपर्छ; यद्यपि उनीसँग परिवार, भिडियोहरू, फोटोहरू अतीतबाट, आदि छन् तापनि। यो सबै सजिलै सफ्टवेयरसँग सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यो गहिरो निर्माणका लागि केही घन्टाको काम हो। मित्रहरू, बच्चाहरू, अभिभावकहरू आदि पनि गहिरो फाइदाहरू हुन सक्छन् र / वा इन्फिनिजिएलर मित्टेबाइट (राज्य ट्राल)।
त्यसैले सोशल मिडिया प्रतिक्रियाहरू अब गम्भीरतापूर्वक लिन सकिँदैन, केवल तकनीकी संभावनाको कारण यो एक मनोवैज्ञानिक अपरेसनको भाग हो जुन तपाईंले गहिराइमा प्रोफाइल र / वा इन्फिनिजिएलर मित्टेटरको माध्यमबाट सोशल मिडिया छलफलको निगरानी गर्नुहुन्छ।
3 जून 2019 मा 13: 29
ओह हाँ र "म तपाईंलाई वर्षको लागी गरिरहेको छु" मनोचिकित्सक ट्रयाकिङ ट्रोल को एक मानक उद्घाटन वाक्य हो
3 जून 2019 मा 14: 21
यदि वकील भन्छिन् कि उसले अदालतबाट सूचनाको सूचनालाई स्वीकार गर्दछ, यसको मतलब यो उसले यससँग केहि गर्न सक्दैन वा त्यसैले सूचनाको लागि यसलाई स्वीकार्नु पर्दैन।
3 जून 2019 मा 14: 34
हो, म पनि स्पष्ट गर्न प्रयास गरिरहेको छु।
3 जून 2019 मा 18: 06
यहा तपाईंले गौडा उल्लेख गर्नुभयो, त्यो मोमबत्तिको शहर हो
कत्तिको हिसाब छ कि पड़ोसी कार हर समय बचाएको छ। सबै आगो व्यक्तिगत आगोहरू हुन् र केवल समयको समयमा पड़ोसी झाडी वा कार आगोमा राख्नुअघि बुझाईएको हुन्छ, यो राम्रो तरिकाले नियन्त्रित हुन्छ, भन्नु, राखिएको छ? ।
3 जून 2019 मा 18: 15
ओह, एक कारमा एक व्यक्ति आगो छैन, कारहरूको एक सारा पंक्ति लगभग समाप्त भयो। मजाक छैन, हामीले के गर्नुपर्छ?
के यो सधैंभरि हुनदेखि रोक्न?
3 जून 2019 मा 19: 52
कसरी यो काम सबै चलचित्रहरू सर्कलमा व्यापक रूपमा मापन गरिएको छ। विज्ञान कथा होइन, तर केवल यो स्वाद मार्फत यो प्रयोग गर्न को लागी। मैले यो देखेको छु किनभने मैले फिल्म देखेको छु।
3 जून 2019 मा 19: 53
म सस्पेन्स एप को मतलब छ।
« रोटरडैममा कुिपमा मार्को बोर्सोटोको उत्कृष्ट कन्सर्ट!
अन्जा स्काप पहिले नै एक PsyOp साबित भयो? किन हेर्नुहोस् (भिडियो) »
कुल भ्रमण: 4.139.898